उत्तम एंटी एजिंग पूरक: निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN)
घर > निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN)
२०१-पछि अध्ययनले त्यो निष्कर्षमा पुगे निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटेडाइड मानव उपभोगका लागि सुरक्षित छ यदि यसको उपभोग तोकिएको सीमामा सीमित छ भने, धेरै उत्पादन कम्पनीहरूले आफ्नो प्रस्ताव लिएर बजारमा प्रवेश गरेका छन्। छनौटको यो ओभरब्युन्डान्सले किन खरीदारहरूलाई कन्फ्युज गर्यो Nictonimade Mononucleotide (NMN) पूरक उनीहरूका लागि सबै भन्दा राम्रो हो। हाम्रो विचारमा, २०२० मा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) को सब भन्दा राम्रो एन्टी एजिंग पूरक कोफ्टेक कम्पनी हो।
कफटेक एक A + मूल्या company्कन गरिएको कम्पनी हो जुन बजारमा झन्डै १२ बर्षदेखि आएको छ र यस समयमा उनीहरूले वफादार अनुयायीहरूको आधार बनाएको छ। कम्पनीले आपूर्ति गरेको एनएमएन पाउडर ट्रिपल ल्याब-टेस्ट, फार्मास्यूटिकल ग्रेड एनएमएन उही कम्पनीहरुबाट प्राप्त भएको छ जसले NMN लाई बिभिन्न महत्वपूर्ण मानव क्लिनिकल परीक्षणहरुका लागि प्रदान गरेको छ जुन बर्षहरुमा देखा परेको छ। को NMN पाउडर कोफ्टेकद्वारा आपूर्ति गरिएको यसको शरीरमा सजीलो सजिलोसँग सुविधा पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा उत्पादको जैवउपलब्धता साथै यसको शारीरिक कार्यहरू पनि बढ्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो पाउडर थोकमा आउँदछ र तपाईं यसलाई तीन महिनाको लागि भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ। सबै मा, यो एक उत्तम पूरक हो जुन बजारमा हाल उच्च उपयोगकर्ता रेटिंगको साथ उपलब्ध छ र यो त्यस्तो कम्पनीबाट आउँदछ जुन भरपर्दो र प्रभावकारी उत्पादनहरू वर्षौं डेलिभर गर्‍यो।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) के हो?
Nmn केको लागि राम्रो छ?
Nmn बुढेसकालको उल्टो सक्छ?
तपाइँ कसरी प्राकृतिक रूपमा Nmn वृद्धि गर्नुहुन्छ?
Nmn ले दीर्घायु बढाउन सक्छ?
तपाइँको प्रणालीमा Nmn कति समय रहन्छ?
जब तपाइँ Nmn लिन रोक्नुहुन्छ के हुन्छ?
Nmn ले तपाईंलाई जवान देखिन्छ?
बुढ्यौली छालाको लागि उत्तम पूरक के हो?
म कसरी प्राकृतिक झुर्रीहरू उल्टाउन सक्छु?
म कसरी बुढ्यौली छालालाई उल्टाउन सक्छु?
सिन्क्लेयरले के सिफारिस गर्छ?
Nmn का दुष्प्रभाव छ?
Resveratrol का दुष्प्रभावहरू के छन्?
के निकोटीनामाइड दैनिक लिन सुरक्षित छ?
किन धेरै धेरै NADH खराब छ?
कुन Nmn वा NR राम्रो छ?
सबै भन्दा राम्रो Nmn पूरक के हो?
Nmn बुढेसकालको उल्टो छ?
तपाईले कति NMN लिनु पर्छ?
Nmn b3 जस्तै हो?
कुन खानामा NAD + को सब भन्दा अधिक एकाग्रता छ?
Nmn फ्लशिंग को कारण छ?
म कनाडामा Nmn कहाँ किन्न सक्छु?
Nmn सुरक्षित छ?
कुन NAD वा NMN राम्रो छ?
म कसरी मेरो NAD + बढि प्राकृतिक रूपमा बढाउन सक्छु?
म NMN संग के ल्याउने?
के मैले TM NMN सँग लिनु पर्छ?
Nmn एक नियासिन हो?
निकोटीनामाइड राइबोसाइड कम बीपी छ?
बेटाइन कहाँ पाइन्छ?
कुन खानाले झुर्रीहरू रोक्दछ?
म कसरी १० बर्ष भन्दा कान्छी देख्न सक्छु?
बुढ्यौलीबाट म कसरी आफ्नो अनुहार रोक्न सक्छु?
कुन खानाले तपाईंलाई उमेर छिटो बनाउँछ?
कुन भिटामिन अनुहारको झिम्का लागि राम्रो छ?
हामीलाई निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) किन आवश्यक छ?
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) प्रयोग
थोकमा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) पाउडर कहाँ किन्ने?
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (1094-61-7) वा NMN एक न्यूक्लियोटाइड हो जुन स्वाभाविक रूपमा हामी खान्ने खाद्य पदार्थहरूको भित्र अवस्थित हुन्छ। यो एवोकैडो, ब्रोकोली, काकडी, गोभी, एडामेमे, र टमाटरमा पाइन्छ। यद्यपि यी खाद्य पदार्थहरूद्वारा आपूर्ति गरिएको एनएमएनको मात्रा कुञ्जी शारीरिक कार्यहरू धान्न पर्याप्त हुँदैन र यसैले मानिसहरूलाई प्रायः एनएमएन पूरक सेवन गर्न सल्लाह दिइन्छ। तर, NMN शरीरको लागि किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड वा NMN निकोटिनमाइड एडेनिन डिनुक्लियोटाइड वा NAD + का अग्रदूत हो। सरल शब्दहरूमा, NMN यौगिक हो जुन कोषहरू भित्र हुने रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको श्रृंखलाबाट NAD + मा रूपान्तरण हुन्छ। अर्कोतर्फ, एनएडी + शरीरको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यसले शरीरको सर्कडियन ताललाई सन्तुलनमा राख्ने, सेलुलर उर्जा छोड्न पौष्टिक तत्त्वहरूलाई तोड्न, र प्रमुख इन्जाइमेटिक प्रतिक्रियाहरू सजिलो पार्ने जस्ता थुप्रै मुख्य कामहरू गर्छ। दुर्भाग्यवस, यद्यपि NAD + शरीरको हरेक कोष भित्र फेला पर्दछ, यसको उत्पादन उमेर साथ घट्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यहाँ कुनै खाद्य पदार्थहरू छैनन् जुन एक व्यक्तिले शरीरमा NAD + को उत्पादन बढाउनको लागि उपभोग गर्न सक्दछ। यो, यसैले, शरीरलाई एक NAD + अग्रगामीको आवश्यकता हुन्छ जुन सेल भित्र NAD + मा परिवर्तन हुन्छ, यसैले शरीर भित्र यसको गिरावटलाई सन्तुलन गर्दछ। यो जहाँ NMN पूरकहरूको प्रयोग खेलमा आउँदछ।
NMN इन्सुलिन गतिविधि र उत्पादन सुधार गर्न फेला परेको छ, परिणामस्वरूप अतिरिक्त चयापचय लाभका साथै ग्लुकोज सहिष्णुता। विशेष गरी, NMN सप्लीमेन्टहरूले मेटाबोलिक अवस्थाहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ जस्तै मधुमेह, फ्याट लिभरको रोग, र मोटापा।
निकोटीनामाइड को प्रशासन मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) बुढेसकालसँग सम्बन्धित डिसफंक्शनहरू लाई कम गर्नका लागि देखाइएको छ। निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) पूरकले वृद्ध चूहोंको महाधमनीमा एन्टिग-एजिंग एमआरएनए अभिव्यक्ति प्रोफाइललाई बढावा दिन्छ, एपिजेनेटिक कायाकल्प र एन्टी-एथरोजेनिक प्रभावहरूको भविष्यवाणी गर्दछ।
NMN सुरक्षित रूपमा चूहोंलाई दिन सकिन्छ र स्वाभाविक रूप मा ब्रोकोली, बन्दकोबी, काकडी, एडामेमे र avocado सहित एक धेरै खाना, मा पाउन सकिन्छ। नयाँ अध्ययनले देखाउँदछ कि जब एनएमएन पिउने पानीमा घुलिन्छ र चूहोंलाई दिइन्छ, यो रक्तप्रवाहमा तीन मिनेट भन्दा कममा देखा पर्दछ।
वैज्ञानिकहरूले यस्ता दुई मध्यस्थहरू निकोटीनामाइड राइबोसाइड (एनआर) र निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) अध्ययन गरेका छन् जुन अरू भन्दा विस्तृत रूपमा गरिएको छ र अनुसन्धान प्रोत्साहनजनक छ। धेरै अध्ययनहरूले संकेत गर्दछ कि यी पूर्वकहरूसँग पूरक रूपमा NAD + स्तर वृद्धि गर्न सक्छ र खमीर, गँड्यौला, र चूहोंको आयु लम्बाउन सक्छ।
हाम्रो हालको अध्ययनले स्पष्ट देखाउँदछ कि एनएमएन द्रुत गतिमा २-– मिनेट भित्रको आंतबाट रगत प्रवाहमा सोस्छ र १ blood मिनेट भित्र रक्तसंचारबाट टिश्युमा सफा हुन्छ।
दुबै रेसवेराटोल र एनएमएनले तपाईको शरीरमा कोशिकाको क्षमता सुधार गरेर आफैलाई मर्मत गर्छन्। त्यसोभए, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई केही समयको लागि लिनुभयो र त्यसपछि यसलाई रोक्नुभयो भने तपाईं तिनीहरूलाई लगत्तै अघि भएको राज्यमा तुरुन्तै फर्कन सक्नुहुन्न किनकि परिवर्तनहरू सेल समारोहमा वास्तविक सुधारहरू हुन्।
"हाम्रो प्रयोगशालाले देखायो कि १२ महिना भन्दा बढी चूहोंलाई एनएमएन दिँदा उल्लेखनीय एन्टी-एजिंग प्रभावहरू देखिन्छ।" इमाईका अनुसार मानिसहरुमा नतिजा अनुवाद गर्दा एनएमएनले १० देखि २० बर्ष भन्दा कान्छो व्यक्तिको चयापचय प्रदान गर्न सक्छ।
१२ सर्वश्रेष्ठ एन्टिगेन्ट पूरकहरू
निकोटीनामाइड राइबोसाइड र निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड
चिनी सेवन सीमित गर्नुहोस्।
नरिवल तेल प्रयोग गर्नुहोस्।
बीटा क्यारोटीन लिनुहोस्।
नींबू बाम पत्ती चिया पिउनुहोस्।
निद्रा स्थिति परिवर्तन गर्नुहोस्।
आफनो मुख धोउ।
अल्ट्राभायोलेट प्रकाशबाट बच्नुहोस्
तपाईंको एन्टिऑक्सिडन्टहरू माथि
तिनीहरूको बिरामीहरूलाई समयपूर्व छालाको बुढो रोक्न मद्दतको लागि, त्वचा विशेषज्ञहरूले बिरामीहरूलाई निम्न सल्लाहहरू प्रदान गर्छन्।
हरेक दिन घामबाट तपाईको छालालाई जोगाउनुहोस्।
ट्यान प्राप्त गर्नुको सट्टा सेल्फ-ट्यानर लागू गर्नुहोस्।
यदि तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने, रोक्नुहोस्।
दोहोरिएको अनुहारको भावलाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
एक स्वस्थ, राम्रो सन्तुलित आहार खानुहोस्।
कम रक्सी पिउनुहोस्।
हप्ताको धेरै दिन व्यायाम गर्नुहोस्।
आफ्नो छाला सफा गर्नुहोस्।
तपाईंको अनुहार दिनमा दुई पटक धुनुहोस् र भारी पसिना पछि।
छाला हेरचाह उत्पादनहरू रोक्नुहोस् जुन डंक वा जलाउँदछ।
डेभिड सिन्क्लेयर लिन्छ:
Resveratrol - १ g / दैनिक - बिहान दही (जहाँ किन्नको लागि हेर्नुहोस्) निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) - १ g / दैनिक - बिहान (कहाँ किन्ने हेर्नुहोस्) Metformin (प्रिस्क्रिप्शन ड्रग) - १ g / दैनिक - बिहान in.० g र ०.g g रातमा - दिन बाहेक व्यायाम गर्दा।
जब मुखले लिन्छ: निकोटिनमाइड राइबोसाइड POSSIBLY SAFE हो जब अल्प-अवधि प्रयोग गरिन्छ। निकोटीनामाइड राइबोसाइड को साइड इफेक्ट सामान्यतया हल्का हुन्छन्। साइड इफेक्टमा पेट सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै मतली र ब्लोटिंग वा छाला समस्याहरू जस्तै खुजली र धेरै पसिना सम्मिलित हुन सक्छ।
जब मुखले लिन्छ: Resveratrol मनपराउँदा सुरक्षित हुन्छ जब खानामा पाइने मात्रामा प्रयोग गरिन्छ। जब 1500 महिना सम्म दैनिक १ 3०० मिलिग्रामसम्म खुराक लिईन्छ, रेसेराट्रल POSSIBLY SAFE हो। २०००--2000००० मिलीग्रामसम्मको उच्च खुराक २--3000 महिनाको लागि सुरक्षित रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यद्यपि रिसभेरट्रोलको यी उच्च खुराकहरूले पेट समस्याहरू निम्त्याउने सम्भावना बढी हुन्छ।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड कम - यदि कुनै - साइड इफेक्टका साथ सुरक्षित हुन सक्छ। मानव अध्ययनमा, प्रति दिन १,०००-२,००० मिलीग्राम लिई कुनै हानिकारक प्रभावहरू थिएन। यद्यपि, धेरैजसो मानव अध्ययनहरू अवधिमा छोटो हुन्छन् र धेरै कम सहभागीहरू हुन्छन्। यसको सुरक्षाको अधिक सही विचारको लागि, अधिक शक्तिशाली मानव अध्ययनहरू आवश्यक छ।
यो अधिक NADH NADH र NAD + को बीच redox सन्तुलन तोड्न सक्छ, र अन्ततः ऑक्सीडेटिव तनाव र विभिन्न चयापचय सिन्ड्रोम हुन सक्छ।
एनआरलाई प्रायः एनएडी + को लागी एक अत्यधिक कुशल अग्रदूतको रूपमा सोचाइन्छ, तर यसको चचेरो भाई अणु एनएमएन, जबकि बेसिसमा कम्पोनेन्ट छैन, ब्लकमा नयाँ बच्चाको रूपमा भौं बढाउँदैछ।
NMN NR भन्दा मात्र ठुलो हुन्छ, यसको मतलब सेलमा फिट हुनको लागि प्राय: यसलाई तोडिनु पर्छ। एनआर, जब अन्य एनएडी + पूर्ववर्तीहरू (निकोोटिनिक एसिड वा निकोटीनामाइड जस्तै) को तुलनामा दक्षतामा सर्वोच्च शासन गर्दछ। तर NMN लाई एउटा नयाँ ढोका दिनुहोस्, एउटामा यो फिट हुन सक्छ, र यो पूरै नयाँ खेल हो।
कुन एनएमएन पूरक उत्तम हो?
NMN Sublingual ट्याबलेटहरू।
NAD + गोल्ड Liposomal NMN।
पुरानो जनावरहरूमा माइटोकोन्ड्रियल फंक्शन सुधार गर्नका लागि उमेरसँगै हुने घाटामध्ये केहीलाई उल्टाउँदै एनएडी + स्तर बढाउन जबरजस्ती गर्ने तरिकाहरू देखाइएको छ। निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) को प्रशासन बुढेसकाल सम्बन्धित डिसफंक्शन कम गर्न देखाईएको छ।
अध्ययनले पत्ता लगायो कि निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड वा NMN मानव प्रयोगको लागि सुरक्षित छ, मानवमा NMN खुराकको सबैभन्दा प्रभावकारी खुराक र आवृत्ति पत्ता लगाउन अझै अनुसन्धान भइरहेको छ। यद्यपि हालसालै गरिएको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि प्रति दिन mg०० मिलीग्रामसम्मको खुराक पुरुषहरूको लागि सुरक्षित छ। आजका दिन, निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड विभिन्न रूपहरूमा उपलब्ध छ, गोली र पाउडर सहित। NMN पूरक आपूर्तिकर्ताहरूले दावी गर्छन् कि मौखिक पूरक शरीरमा NAD + उत्पादन बढाउनको लागि ठिकै प्रभावकारी हुन्छ। यी दावीहरू Slc500a12, निकोटीनामाइड न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर, पेटमा NMN को अवशोषणमा मद्दत गर्दछ भन्ने तथ्यमा आधारित छन्।
NMN छैन। एनएमएन भिटामिन बी of को रूप होईन, र कुनै पनि क्लिनिकल परीक्षणहरू छैनन् यसले मानवमा NAD बढाउँदछ। एनएमएन अणुको प्रकार पनि होइन जुन कहिले पनि भिटामिनको रूपमा लिइन्छ किनकि यसले फस्फेट समावेश गर्दछ, जसले कोषहरूमा प्रवेश गर्ने यसको क्षमतालाई असर गर्छ।
खाना जुन NAD स्तर बढावा दिन्छ
त्यहाँ केहि खानाहरू छन् जुन शरीरमा NAD स्तर बढाउन सक्छ। ती मध्ये केही समावेश:
डेयरी मिल्क - अनुसन्धानले संकेत गरेको छ कि गाईको दुध रबोसाइड निकोटीनामाइड (आरएन) को एक राम्रो स्रोत हो। ताजा गाईको दुधको एक लिटर NAD + को बारे मा 3.9µmol हुन्छ। त्यसोभए जब तपाईं दुधको स्फूर्तिदायी गिलासको आनन्द लिइरहनुभएको छ, तपाईं वास्तवमै जवान र स्वस्थ हुनुहुनेछ!
माछा - यहाँ तपाईलाई माछाको आनन्द लिनको लागि अर्को कारण छ! केही प्रकारका माछा जस्तै ट्यूना, सालमन र सार्डिनहरू शरीरका लागि एनएडी + को समृद्ध स्रोत हुन्।
मशरूम - धेरै व्यक्तिहरू मशरूमहरू मन पराउँछन् र उनीहरूलाई नियमित भोजनको रूपमा नियमित आहारको रूपमा। तर के तपाईंलाई थाहा छ मशरूमहरू, विशेष गरी क्रिमिनी मशरूमहरूले पनि प्राकृतिक रूपमा NAD स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ? हो त्यो सहि हो। त्यसोभए, च्याउ खाँदा रमाईलो गर्नुहोस् र हेर्नको लागि जारी राख्नुहोस् र कान्छो र थप युवा छ!
खमीर - खमीर एक घटक हो जुन रोटी र अन्य बेकरी उत्पादनहरू बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। खमीरमा रिबोसाइड निकोटीनामाइड (RN) हुन्छ, जुन NAD को एक अग्रदूत हो। यहाँ तपाईका मनपर्ने पेस्ट्री वा बन्सको आनन्द लिनको लागि अर्को कारण यो छ जब तपाई बेकरीमा जानुहुन्छ! एकै समयमा NAD स्तर बढावा दिंदा तपाईंको मनपर्ने खानाको मजा लिनुहोस्। कस्तो राम्रो छ!
हरिया तरकारीहरू - हरियो तरकारीले तिनीहरूमा सबै प्रकारका पोषक तत्वहरू समावेश गर्दछ जुन विभिन्न प्रकारले लाभदायक छ। हालसालै, यो प्रकाशमा आएको छ कि हरियो तरकारीहरू पनि शरीरको लागि NAD को एक राम्रो स्रोत हो। यी तरकारीहरू मध्ये केहि मटर र शतावरी समावेश गर्दछ।
सम्पूर्ण अनाज - जस्तो कि माथि छलफल गरीयो, भिटामिन बी मा आरएन पनि हुन्छ, NAD का अग्रदूत। जे होस्, जब तरकारीहरू, खाद्यान्न वस्तुहरू वा अन्नहरू पकाइन्छ वा प्रशोधन गरिन्छ, तिनीहरूले पोषण साथै भिटामिन स्रोत गुमाउँछन्। तसर्थ, यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईंले कच्चा तरकारीहरू पनि खानुपर्दछ र प्रशोधन गरिएको खानाको सट्टा सम्पूर्ण अनाज लिनु पर्छ।
मादक पेय पदार्थहरूलाई काट्नुहोस् - NAD शरीरको समग्र मेटाबोलिक प्रक्रियाहरूका लागि जिम्मेवार हुन्छ। रक्सीले यी प्रक्रियाहरूमा हस्तक्षेप गर्दछ र NAD को प्रभावकारिता कम गर्दछ। तसर्थ, तपाईंले रक्सीयुक्त पेयको अत्यधिक सेवनबाट अलग रहनु पर्छ किनकि ती तपाईंको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छैन।
A 'Niacin फ्लश' पूरक नियासिन (भिटामिन B3) को अधिक मात्रा लिनेको एक साइड इफेक्ट हो। फ्लस तब हुन्छ जब नियासिनको कारणले तपाईंको छालाको साना केशिका पातलो हुन्छन्, जसले छालाको सतहमा रगतको प्रवाह बढाउँदछ। भिटामिन बी ((नियासिन) सप्लीमेन्टहरूको विपरीत, निकोटीनामाइड राइबोसाइडले अनुहारको फ्लसिंग गर्नुहुन्न।
NMN राइबोज र निकोटीनामाइडबाट निकालिएको न्यूक्लियोटाइड हो। निकोटीनामाइड राइबोसाइड (नाइगेन) जस्तै, NMN नियासिनको व्युत्पन्न हो, र NAD + का अग्रगामी हो। एनएमएन क्यानाडा: निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड हाल क्यानाडामा आहार पूरकको रूपमा बिक्रीको लागि उपलब्ध छैन।
वर्षौंदेखि, धेरै अध्ययनहरू अध्ययन गर्न सञ्चालन गरिएको छ कि मानवमा NMN उपभोग सुरक्षित छ वा छैन। यी अध्ययनहरूले बारम्बार खुलाए कि निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड खपत बिल्कुल सुरक्षित छ जब यसको खुराक प्रतिबन्धित छ। सामान्यतया, पुरुषहरूलाई mg०० मिलीग्राम भन्दा कमको दैनिक खुराकमा टाँस्न सल्लाह दिइन्छ। यद्यपि यो हाइलाइट गर्नुपर्दछ कि एफडीएले एनएमएनलाई सुरक्षित औषधिको रूपमा अनुमोदन गरेको छैन। यसैले, यदि तपाईंसँग कुनै एलर्जी वा चिकित्सा समस्याहरू छन् भने, यो उत्तम हो तपाईंलाई कुनै पनि NMN सप्लीमेन्टहरू सुरू गर्नु अघि आफ्नो चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस्।
NAD र NMN लोकप्रिय एन्टी एजिंग पूरक सामग्री हुन्, र राम्रो कारणका लागि।
प्राकृतिक रूपमा NAD स्तर बढावा
निकोटीनामाइड राइबोसाइड आहार पूरक
धेरै धेरै घाम राम्रो हुन सक्दैन!
तपाईंको NAD + स्तर सुधार गर्न, तपाईं ढिलाइ-रिलीज NMN क्याप्सूल एक Sirtuin सक्रियकर्ता संग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एक Resveratrol एक पूर्ण-मोटा दहीले Resveratrol को जैव उपलब्धतामा मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईं हाल NMN लिदै हुनुहुन्छ वा सुरू गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई मेथिलेसनको लागि थप समर्थनको रूपमा TMG सँग जोडी गर्ने विचार गर्नुहोस्। अन्य मिथाइल दाताहरू जो उपयोगी हुन सक्छन् me मेथिलेटेड बी 6, बी 12, र फोलेट समावेश गर्दछ।
निकोटीनामाइड र निकोटीनामाइड राइबोसाइड बीच के भिन्नता छ? ())
Niacin निकोटीन को एक oxidated रूप हो कि शरीर NAD मा रूपान्तरण गर्न सक्छन्। निकोटीनामाइड नियासिनको एक अम्माइड हो जुन एनएडीसँग मिल्दोजुल्दो छ र कम साइड इफेक्टहरू छन्। निकोटीनामाइड राइबोसाइड निकोटिनमाइडको एक कृत्रिम रूप हो जुनसँग बिभिन्न विशेषताहरू छन्।
निकोटिनमाइड राइबोसाइड जस्तै, NMN नियासिनको व्युत्पन्न हो, र मानवसँग एनजाइम हुन्छन् जसले निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनोक्लियोटाइड (NADH) उत्पन्न गर्न NMN प्रयोग गर्न सक्दछन्। चूहोंमा, NMN १० मिनेट भित्र कोशाहरू भित्र साना आंतहरू मार्फत NAD + रूपान्तरण गर्दै Slc10a12 NMN ट्रान्सपोर्टर मार्फत।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनुकाइओटाइड (एनएडी +) को स्वाभाविक रूपमा हुने अग्रगामी हो, क्यालोरीक प्रतिबन्धको फाइदाजनक प्रभावहरूको महत्वपूर्ण मध्यस्थता, र यसैले एक उपन्यास क्यालोरिक रोकावट मिमेटिक यौगिक। हामीले भर्खर स्वस्थ मध्यम-बुढा र वृद्ध वयस्कहरूमा निकोोटिनमाइड राइबोसाइड पूरकको पहिलो पायलट अध्ययन पूरा ग and्यौं र देखा पर्‍यो कि weeks हप्ता पूरकले १२०-११6 एमएमएचजीको आधारभूत एसबीपी भएका व्यक्तिहरूमा mm एमएमएचजीले सिस्टोलिक रक्तचाप (एसबीपी) घटायो (उन्नत एसबीपी / चरण १ उच्च रक्तचाप) प्लेसबोको तुलनामा, र कम धमनी कठोरता, CVD को एक कडा स्वतन्त्र भविष्यवाणी र सम्बन्धित विकृति र मृत्यु दर।
बेटाइन सूक्ष्मजीव, बोटबिरुवा र जनावरहरूमा पाइन्छ र गहुँ, शंख, पाले पालुई, र चिनी बीट लगायतका धेरै खाद्य पदार्थहरूको महत्त्वपूर्ण अंश हो। बेटेन एक zwitterionic क्वाटरनरी अमोनियम कम्पाउन्ड हो जुन Trimethylglycine, glycine betane, Lycine, र oxyneurine को रूपमा पनि चिनिन्छ।
यहाँ केहि राम्रा एन्टिग-एजिंग फूडहरू छन् तपाईको शरीरलाई पोषण दिन भित्रबाट आउने चमकलाई।
रातो काली मिर्च
एक हाइड्रेटिंग मास्क प्रयोग गर्नुहोस्।
एक चमकदार फाउंडेशन छनौट गर्नुहोस्
आफ्नो कपाल एक बिट हल्का
एक्सफोलिएट (तर यो अधिक नगर्नुहोस्)
तपाईंको वाटरलाइनलाई सेतो बनाउनुहोस्
खनिज धुंधको साथ तपाईंको लुक समाप्त गर्नुहोस्
हरेक दिन घामबाट तपाईको छालालाई जोगाउनुहोस्
ट्यान प्राप्त गर्नुको सट्टा आत्म-ट्यानर लागू गर्नुहोस्
यदि तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने, रोक्नुहोस्
दोहोरिएको अनुहारको भावलाई वेवास्ता गर्नुहोस्
एक स्वस्थ, राम्रो सन्तुलित आहार खानुहोस्
कम रक्सी पिउनुहोस्
हप्ताको धेरै दिन व्यायाम गर्नुहोस्
आफ्नो छाला सफा गर्नुहोस्
फ्रेन्च फ्राइहरूको लागि मीठा आलु फ्राइज
सेतो रोटीको लागि अंकुरित रोटी
सेतो चिनीको लागि मह वा फल
जैतुनको तेल वा मार्जारिनका लागि एभोकैडो
प्रशोधित मांसको लागि कुखुराको साथ टाँसिनुहोस्
दुग्ध महसुस गर्नुहोस्
सोडा र कफीको बारेमा दुई पटक सोच्नुहोस्
ठिक्क मात्रामा मदिरापान गर्नुहोस्
उच्च तातोमा पकाउने बेवास्ता गर्नुहोस्
चामलको केक स्विच गर्नुहोस्
लिपोइक एसिडको साथ फ्रुक्टोज प्रतिरोध गर्नुहोस्
भिटामिन सीले उमेरका लक्षणहरूलाई हटाउन पनि मद्दत गर्दछ किनकि यसको शरीरको प्राकृतिक कोलेजेन संश्लेषणमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसले क्षतिग्रस्त छाला निको पार्न मद्दत गर्दछ र, केहि केसहरूमा झिम्काको उपस्थिति कम गर्दछ। पर्याप्त भिटामिन सी सेवनले सुक्खा छाला मर्मत गर्न र रोक्न मद्दत गर्दछ।
बुढेसकाल समय सम्बन्धित र मानव शारीरिक प्रकार्यहरूको समय-सहयोगी retrogression हो। यद्यपि बुढ्यौली अपरिहार्य र अपरिहार्य छ, वैज्ञानिकहरूले वर्षहरू यस प्रक्रिया कसरी ढिलो र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न समर्पित गरेका छन्। यस निरन्तर अनुसन्धानले एन्टि aging-एजिंग गुणहरूको साथ धेरै पदार्थहरू र यौगिकहरूको अन्वेषणमा पुर्‍यायो जुन एन्टी-एजिंग पूरकहरूमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यस्तो एम्पाइन्ड महत्वपूर्ण एन्टी एजिंग गुणहरूसँग जुन वैज्ञानिकहरूले महसुस गरेको आकर्षण हो NMN वा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। यस लेखमा, हामी एनएमएनको बारेमा जान्न र त्यहाँ २० know१ मा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडको उत्तम एन्टि aging एजिंग पूरकको बारेमा सबै कुरा गर्छौं।
केही वर्ष पहिले सम्म, NMN प्रयोग सम्बन्धित सबै अध्ययनहरू जनावरहरूमा गरिएको थियो र ती अध्ययनहरूले आशाजनक परिणामहरू देखाए पनि, यी नतिजाहरू मानिसमा NMN प्रयोगका फाइदाहरू स्थापना गर्न पर्याप्त थिएनन्। २०१ 2016 मा, NMN उपभोगको सुरक्षा र मानव रगतमा यसको समय कोर्स विश्लेषण गर्न एउटा अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले आशाजनक परिणामहरू प्रदान गर्‍यो। त्यो पछि, अर्को अध्ययन २०१ 2016 मा NMN खपतको प्रभाव अध्ययन गर्नका लागि उच्च बीएमआई, रगत ग्लुकोज, र रगत ट्राइग्लिसराइड्स पीडित older० बृद्ध महिलाहरुमा गरिएको थियो। अध्ययन सफल थियो। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र निश्चित उमेरका महिलाहरूमा सीमित भएकोले वैज्ञानिकहरूले विश्वास गरे कि एनएमएनको उपभोग मानव जातका लागि सुरक्षित छ वा छैन भन्ने कुराको लागि अझ बढी प्रमाण आवश्यक छ।
त्यसकारण, भर्खरै, २०१ in मा, केियो विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिसिनको क्लिनिकल ट्रायल इकाईमा एउटा अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनको विषय 2019० र between० बीचको उमेरका १० पुरुष थिए। यी व्यक्तिहरूलाई १०० मिलीग्रामदेखि 10०० मिलिग्रामसम्म खुराक दिइयो। अध्ययनले निष्कर्ष निकाल्‍यो कि एनएमएन मानव जातिले राम्रोसँग सहिष्णु छ र उपभोग गर्न सुरक्षित छ जबसम्म यसको उपभोग राम्रोसँग नियमित छ। यो अध्ययन महत्वपूर्ण थियो किनकि यो पहिलो मानव जीवन मा NMN को अध्ययन को समग्र मानव स्वास्थ्य मा प्रभाव को अध्ययन गर्न आयोजित गरिएको थियो। एनएमएनको उपभोग सुरक्षित छ भन्ने कुरा स्थापित हुने बित्तिकै निर्माणकर्ताहरूले एनएमएन सप्लीमेन्टको साथ बजारमा बम विष्फोटन गर्न थाले जुन ती दिनहरूमा धेरै सामान्य भएको छ।
यस सेक्सनमा, हामी निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड वा NMN सुविधाहरूसँग सम्बन्धित सम्भावित फाइदाहरूका बारेमा छलफल गर्दछौं।
① NMN ढिलो उमेर ढल्छ
एनएमएनको एक सबैभन्दा ठूलो फाइदाहरू यो हो कि यसले बुढेसकालको प्रक्रियालाई ढिला बनाउँछ। केही वर्ष अघि अस्ट्रेलियाका लोकप्रिय जीवविज्ञानी र जेनेटिक्सका प्रोफेसर डेभिड सिन्क्लेयरले एनएडी + ले उमेर ढिलो हुँदै गएको र मानवमा उमेर सम्बन्धी रोगहरू सुरु भएको प्रमाण दिए। जे होस्, NAD को उत्पादन उमेर को साथ कम हुन्छ। यसैले, व्यक्ति उमेर को रूपमा, एक NAD + अग्रदूत को आवश्यकता तिनीहरूको शरीर भित्र बढ्छ। यो जहाँ NMN खेलमा आउँछ: NMN कोषहरू प्रवेश गर्दछ र धेरै रासायनिक परिवर्तनहरू NAD + मा परिवर्तन हुनु अघि र उमेर प्रेरित प्रक्रिया धीमा गर्दछ।
Di मधुमेहबाट पीडित व्यक्तिहरूले यसको उपभोगबाट फाइदा लिन सक्दछन्
NMN मौखिक पूरकले कसरी चूहोंमा आहार र उमेर सम्बन्धित मधुमेहको साथ मद्दत गर्‍यो भनेर अध्ययन गर्न एउटा अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले खुलासा गर्‍यो कि मौखिक एनएमएन पूरक माउसले इन्सुलिनप्रति बढि संवेदनशीलताका साथै यसको स्रावको प्रदर्शन गर्दछ। यस अध्ययनले निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड वा NMN मौखिक पूरकले मधुमेह पीडित मानिसहरूलाई मद्दत पुर्‍याउन केही संकेत प्रदान गर्‍यो।
③ NMN उपभोगलाई पनि सुधारिएको हृदय स्वास्थ्यसँग जोड्दछ
अर्को अध्ययन NMN पूरक चूहोंमा हृदय स्वास्थ्यमा कसरी प्रभाव पढायो भनेर अध्ययन गर्न गरिएको थियो NMN ले उमेर सम्बन्धित रक्त वाहिका र चूहोंमा केशिका क्षतिलाई मात्र उल्ट्याएन तर यसले रक्त प्रवाहमा पनि सुधार ल्यायो भनेर पत्ता लगायो। सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा के भने यो हो कि चूहोंमा एनएमएन मौखिक सप्लीमेन्ट दिइयो, नयाँ रक्त वाहिकाहरूको विस्फोट देखिएको थियो। हालसालै, अर्को अध्ययन एनएमएनको प्रभाव चूहोंमा स्वास्थ्यको स्वास्थ्यमा पार्ने अध्ययनको लागि गरिएको थियो र यो अध्ययनले पनि त्यस्तै नतिजाहरू पत्ता लगायो। यी अध्ययनहरूले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई विश्वास गर्न पर्याप्त प्रमाण प्रदान गर्दछ कि NMN उपभोगले मानव हृदयमा हृदय स्वास्थ्यलाई पनि बढावा दिन्छ।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN)
Al Alzheimer's भएका व्यक्ति NMN प्रयोगबाट फाइदा लिन सक्दछन्
अल्जाइमर रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूमा, एनएडी स्तर उल्लेखनीय रूपमा तल जान्छ। तसर्थ, जब अल्जाइमरले ग्रस्त व्यक्ति NMN ले पीडित हुन्छन्, शरीरले NAD + को मात्रा बढाउँदै प्रतिक्रिया गर्दछ, जसले फलस्वरूप मोटर नियन्त्रण बढाउँदछ, SIRT3 जीन गतिविधि बढ्छ, मेमोरीमा सुधार गर्दछ, र न्यूरोइन्फ्लेमेसन घटाउँछ। तसर्थ, अल्जाइमरबाट पीडित व्यक्तिहरूले उपभोगबाट लाभ लिन सक्दछन् NMN.
M NMN ले किडनी प्रकार्यमा सुधार गर्दछ
मौखिक NMN पूरक सुधारिएको किडनी प्रकार्यको साथ जोडिएको छ। यो किनभने NMN ले NAD + र SIRT1 को उत्पादन बढाउँदछ, ती दुवै दुबै वृद्ध किडनी समारोहसँग जोडिएका छन्।
यदि तपाई थोरैमा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) पाउडर किन्नको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने, NMN पाउडर किन्नको लागि उत्तम स्थान cofttek.com हो। कफटेक एक उच्च-टेक फार्मास्यूटिकल उद्यम हो जुन २०० 2008 देखि नवीन र उच्च-गुणात्मक उत्पादनहरू प्रदान गर्दै आएको छ। कम्पनीले एक प्रभावशाली आर एंड डी टीमलाई प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरूको विकासका लागि प्रतिबद्ध अनुभवी व्यक्तिको साथ गर्व गर्दछ। Cofttek चीन, यूरोप, भारत, र उत्तर अमेरिकामा औषधी कम्पनीहरूमा साझेदारहरू र आफ्ना उत्पादनहरू आपूर्ति गर्दछन्। कोफ्ट्टेक द्वारा आपूर्ति गरिएको Nic-निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड धेरै उच्च-गुणवत्ताको छ र मानव उपभोगको लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पनीले यो पाउडर थोकमा आपूर्ति गर्दछ, अर्थात् २k किलोग्रामको एकाइहरूमा। यसैले, यदि तपाइँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो पाउडर थोकमा किन्नुहोस्, Cofttek कम्पनी हो तपाईंले सम्पर्क गर्नु पर्छ - ती बजारमा उत्तम निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) पाउडर आपूर्तिकर्ता हुन्।
(१) याओ, जेड, एट अल। (२०१ 1) निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडले जेएनके एक्टिभेसनलाई अल्जाइमर रोग उल्टाउन रोक्दछ।
(२) योशिनो, जे, एट अल। (२०११) निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लिओटाइड, एक प्रमुख NAD (+) इन्टरेडिएट, चूहोंमा डाइट र आयु-प्रेरित मधुमेह को पाथोफिजीलोजी उपचार गर्दछ। सेल मेटाबोलिज्म।
()) यामामोोटो, टी। एट अल। (२०१ 3)। निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लिओटाइड, एनएडी + संश्लेषणको एक इंटरमीडिएट, हृदयलाई ईस्केमिया र रिपफ्यूजनबाट बचाउँछ।
())। वाang्ग, वाई, एट अल। (२०१))। एनएडी + पूरकले परिचयको डीएनए मर्मत कमीको साथ नयाँ एडी माउस मोडलमा कुञ्जी अल्जाइमरका सुविधाहरू र डीएनए क्षति प्रतिक्रियालाई सामान्य बनाउँदछ।
()) केइसुके, ओ। एट अल। (२०१ 5) मेटाबोलिक डिसअर्डरहरूमा बदलिएको NAD मेटाबोलिजमको प्रभावहरू। जैव चिकित्सा विज्ञान जर्नल।
(6)। यात्रा अन्वेषण को लागी उदा।
(7)। Oleoylethanolamide (oea) - तपाईंको जीवनको जादुई छडी।
(8)। आनंदमाइड बनाम सीबीडी: कुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि उत्तम छ? तपाईंले उनीहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा!
(9)। निकोोटोनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा।
(10)। म्याग्नेशियम l-थ्रोनेट पूरक: लाभ, खुराक, र साइड इफेक्ट।
(11)। Palmitoylethanolamide (मटर): लाभ, खुराक, प्रयोग, पूरक।
(12)। शीर्ष health स्वास्थ्य लाभहरू रेवेराट्रोल पूरकहरूको।
(13)। फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) लिनका शीर्ष benefits लाभहरू।
(14)। पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (pqq) लिने शीर्ष5फाइदाहरू।
(15)। अल्फा gpc को सबै भन्दा राम्रो nootropic पूरक।
मलाई लाग्छ NMN निकोटिनमाइड राइबोसाइड (NR) भन्दा धेरै प्रभावकारी छ किनकि यसले सानो आन्द्रामा अझ राम्रोसँग अवशोषण गर्न सक्दछ।
GeeHii मस्तिष्क समीक्षा
व्यक्तिहरू प्राय: आफ्नो शरीरको लागि पूरकको सही मात्रा फेला पार्नुपर्दछ, सामान्यतया कतै २ 250०mg र १g बीचमा। तपाईं जति उमेरको हुनुहुन्छ, साधारणतया तपाईं अधिक लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
केवल निकोटीनामाइड (NAM) सँग पूरक नगर्नुहोस्। यो वास्तवमा तपाईले चाहानु हुने कुराको उल्टो गर्छ। यदि तपाईंले आफ्नो शरीरलाई एनएएम दिनुहुन्छ भने यसले एनएडी + लाई कम गर्दछ।
या त NR वा NMN छान्नुहोस्। साथै, सस्तो छायादार सामानहरू अलीबाबा वा केहि पनि बन्द गर्न नखोज्नुहोस्। यो विगतमा प्रमाणित भएको छ कि धेरै चीजहरू नक्कली छन् र वास्तवमा तपाईलाई चोट पुर्‍याउन सक्छ।
जब क्यान्सर हुनु भन्दा पहिले, उच्च NAD + ले ले डीएनए उत्परिवर्तन र सेन्सेन्ट कोषाहरूको स of्कलनको जोखिम कम गर्नुपर्दछ, वास्तविक वास्तविक मुद्दा NAD + बूस्टर लिइरहेको छ जबकि वर्तमानमा क्यान्सर भइरहेको छ, किनकि यसले NAD + आश्रित ट्यूमरको विकासलाई गति दिन सक्दछ किनभने तिनीहरूले NAD + प्रयोग गर्छन्। धेरै नियमित कोषहरू जस्तै गर्छन, त्यसैले यो राम्रो छ को लागी हरेक महिना आफ्नो सेतो रक्त कोशिका गणना गर्न। यदि तपाईं क्यान्सर छैन, यो यो रोक्न पर्छ।
म मेरो माइटोकन्ड्रियामा कुरा गर्न सक्दिन, तर डेढ बर्ष पछि एनएमएन (सबलिंगुअल) लिएपछि तपाईंले यसलाई मेरो चिसो मृत हातहरूबाट पेस गर्नुपर्नेछ।
अधिक ऊर्जा (ऊर्जा भण्डार, वायर्ड लाग्दैन), व्यायाम र तनावको लागि छिटो पुन: प्राप्ति, राम्रो निन्द्रा, समेत मेरो जीवनमा पहिलो पटक केही मांसपेशिहरू निर्माण गर्‍यो।
१ जी मा सबलिual्गुअल NMN ले मलाई एक उल्लेखनीय उर्जा बढावा दिन्छ। मैले यो तुरून्त नोटिस गरें। मेरो दर्शन पनि परिवर्तन हुन्छ (तीव्र हुन्छ)। साथै, हड्डी फिश मौसममा फिर्ता आयो। ;-)
डेभिड सिन्क्लेयरले सुझाव दिए कि चोरहरूमा रोकिने रणनीतिहरूमा सब भन्दा लामो आयु हुन्छ र त्यसले मलाई अर्थ दिन्छ।
व्यक्तिहरूले प्राय: तपाईको शरीरहरूको लागि सहि पूरकको मात्रा मात्र फेला पार्नुपर्दछ, सामान्यतया २m० मिग्रि र १ जीबी बीच।
तपाईं जति उमेरको हुनुहुन्छ, साधारणतया तपाईं अधिक लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
लामो यात्राको लागि यसमा रहनुहोस्। मैले पुरानो स्कार्हरू गायब हुने, मेरा आँखामुनि थोरै झोला र मुख्य चयापचय परिवर्तन देखेको छु। ह्या hang्गओभरको कम चीज पनि हो।
धन्यवाद, म यस्तो राम्रो र हास्यास्पद लेख हेर्न पाउँदा खुसी छु।